Boqolaal Qof Oo Ku Dhaawacmay Mudaaharaad Lagaga Soo Horjeedo Qiimaha Shidaalka Ka Dhacay Faransiiska – somalilandtoday.com
Boqolaal Qof Oo Ku Dhaawacmay Mudaaharaad Lagaga Soo Horjeedo Qiimaha Shidaalka Ka Dhacay Faransiiska
(SLT-Paris)-Mudaaharaad lagaga soo horjeedo qiimaha shidaalka ee Faransiiska oo qaaliyoobay ayaa horseeday in ay dhaawac maan 400 oo qof, sida ay masuuliyiintu sheegeen, mudaaharaadka ayaana galay maalintii labaad.
Wasaaradda amniga gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in ku dhawaad 300 oo mudaaharaadeyaal ah su’aalo la waydiiyay, 157 ka mid ahna saldhigyo booliis loo sii qaaday.
Dad lagu qiyaasay 288,000 oo ruux ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadkii Sabtidii dhacay, sida ay wasaaraddaasi sheegay, tiro dad ah ayaana sii waday mudaaharaadka Axaddii.
Mudaaharaadayaasha oo loo yaqaanno “yellow vests” oo astaan jaale ah wata ayaa jidgooyooyin dhigtay dalka Faransiiska oo dhan.
Dad badan oo mudaaharaadayaasha ka mid ah ayaa caradii kula dhacay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyaga oo ku eedeeyay in uusan wax xiriir ah la soo samaynin, mudaaharaadkanna wali waxba kama uusan dhihin, waxaana loo arkaa in shacbiyaddiisu ay hoos u dhacday marka la eego ra’yi aruurinnada la sameeyay.
Madaxweynaha ayaa talada dalka qabtay sannadkii hore wuxuuna wacad ku maray in uu wax ka qaban doono dhaqaalaha Faransiiska, wuxuuna ku baaqay in qiimaha shidaalka kor loo qaado si dadka Faransiiska looga weeciyo adeegsiga noocyo ka mid ah shidaalka.
Dawladda ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin dhawr ah oo ay gacan ku siinayso qoysaska saboolka ah si ay isaga bixiyaan kharashaadka shidaalka daruuriga ah ee ay u baahan yihiin iyo lacagaha kaga baxa gaadiidka.